Young De Bruyne wanted to join Liverpool
Posted By:	Times of News January 11, 2018 0
Kevin De Bruyne’s arise underneath Pep Guardiola’s stewardship has beenapivotal reason behind Manchester City’s mastery overaPremier League this season. But could De Bruyne have been appearing inaLiverpool shirt? It could have happened, ifachildhood Belgian general had had […]
ဒဏ်ရာ ထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့ ၀ီလ်ရှိုင်းယား
အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ၀ီလ်ရှိုင်းယားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာ ထပ်မံရရှိခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို လွဲချော်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ရာသီအစပွဲစဉ်တွေကို လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ ၀ီလ်ရှိုင်းယားဟာ ဒဏ်ရာမှ ပြန်လည်သက်သာလာပြီး ခြေစွမ်းပြန်လည်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တဲ့ လိဂ်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ ၀ီလ်ရှိုင်းယား ဒဏ်ရာပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာ အာစင်ဝင်းဂါးက ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Thanks for allamessages and support after final night. Good news is […]
Six arrested for harlotry during massage parlours in Jalan Besar, Little India
109-Year-Old Veteran and His Secrets to Life Will Make You Smile | Short Film Showcase published: 05 Feb 2017 views: 8358617 Meet Richard Overton, America’s oldest veteran. In this sharp-witted brief film by Matt Cooper and Rocky Conly, hearawhiskey-drinking, cigar-smoking supercentenarian exhibit his […]
ဆန်းချက်ဇ်ကိုခေါ်ယူဖို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း ပစ်မှတ်ထားလာ
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှူး ဆန်းချက်ဇ်ကို ခေါ်ယူဖို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲ မြို့ခံ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက လည်း ဆန်းချက်ဇ်ကိုခေါ်ယူ ဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေကြောင်း နောက်ထပ်သတင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာက ဆန်းချက်ဇ်ကိုခေါ်ယူဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအ ရွှေ့ကာလကတည်းက စောင့်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခါနီး နောက်ဆုံး အချိန်မှာမှ ပျက်ပြယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအပတ်အစောပိုင်းမှာပဲ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ဆန်းချက်ဇ်ကိုခေါ်ယူဖို့ ပြောင်းရွှေ့ ကြေး ပေါင်သန်း(၂၀)နဲ့ ကနဦးသဘောတူညီမှုရပြီးဖြစ်ကြောင်း The Guardian က ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အာဆင်နယ်အသင်းဘက်က လက်ရှိ ဘာမှမတုန့်ပြန်သေးချိန်မှာပဲ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၂၅)သန်းနဲ့ ဈေးပိုပေးပြီး […]
Wilshere allays new damage fears
Arsenal midfielder Jack Wilshere has played down concerns that he could be set for another spell onasidelines after pang an ankle damage opposite Chelsea on Wednesday. The 26-year-old is starting to rediscover his best form now that he’s behind to full fitness, carrying […]
Democrats exhibit Putin’s efforts to criticise U.S. democracy
Democrats Want Action On Russian Election Meddling | Velshi Ruhle | MSNBC published: 10 Jan 2018 views: 350 It’s beenayear given comprehension agencies pronounced Russia interfered inaelection, though not most has been finished yet. NBC’s Ken Dilanian and The Beat Host, […]
Indonesia Assures Release OF Six Malaysian Fisherman
Mayweather’s implausible response to #MeToo question
Floyd Mayweather was askedadoubt concerninganew #MeToo hashtag campaign, and responded to it inaapproach usually he could. The late warrior seemed to be totally unknowingly ofaamicable media campaign, that aims to lift recognition for victims of passionate attack […]
မော်ရင်ဟိုကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ကလွိုက်ဗက်
အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တောင်ပံကစားသမား ကလွိုက်ဗက် ဟာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘောလုံးရာသီ ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲစဉ်အပြီး နည်းပြမော်ရင်ဟိုရဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းမှာ လာရောက်ကစားဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ။် အဆိုပါ ဗိုလ်လုပွဲစဉ်မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက အေဂျက်စ်အသင်းကို (၂)ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပွဲအပြီးမှာ မော်ရင်ဟိုက ကလွိုက်ဗက် ကို ခေါ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလွိုက်ဗက်ဟာ နယ်သာလန်လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ပက်ထရစ် ကလွိုက်ဗက်ရဲ့ သား လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကလွိုက်ဗက် ကတော့ ထုိုစဉ်က မော်ရင်ဟိုရဲ့ ပြောကြားမှုဟာ ယခင်တွေ့ ဆုံ နေကျအကြိမ်ကလို သာမန် […]